Taorian’ny fihetsiketsehana roa herinandro maninjitra, manery ny governora hiala ny Pôrtô Rikana · Global Voices teny Malagasy
Puerto Rico celebrates in the face of an uncertain future.
Voadika ny 29 Aogositra 2019 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Română , Français, Ελληνικά, বাংলা, 繁體中文, English
Mpanao fihetsiketsehana mifaly ao anaty orana tamin'ny 22 Jolay tany San Juan, Porto Riko. Sary nivezivezy be tao amin'ny media sosialy ary nalaina tao amin'ny kaonty Twitter an'ilay mpiasa ara-tsosialy Larry Emil Alicea-Rodríguez (@larryemil).
Nametra-pialàna ny governoran'i Porto Riko, Ricardo Rosselló taorian'ny tapa-bolana nisian'ny hetsi-panoherana faobe sy fitroarana sivily ahitana ny sokajin'olona rehetra. Noho ny tsy fisian'ny sekreteram-panjakana, dia ny sekreteran'ny fitsarana Wanda Vázquez no ho lasa governora. Manankery manomboka amin'ny 5 ora maraina amin'ny 2 Aogositra ny fialàn'i Rossello.
Nirongatra ity hetsika nasionaly nokarakaraina manokana sy tsy mitsaha-mitombo ity noho ny kolikoly mihoa-pampana sy ny resaka Telegram tafaporitsaka ahitana fiteny manavakavaka vehivavy, manambany vehivavy, mankahala pelaka sy fanalam-baraka, miaraka amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny politikam-panjakana teo amin'ireo mpikambana sy tsy mpikambana ao amin'ny kabinetran'i Rosselló. .
Narahana fisamborana ireo mpikambana ambony ao amin'ny fitantanan'i Rosselló ity resaka tafaporitsaka tamin'ny Telegram ity, ka tao anatin'izany ny Sekreteran'ny fampianarana teo aloha, Julia Keleher, noho ny fiampangana izay nahitana famotsiam-bola, fanaovana hosoka ary halatra, ankoatra ny hafa.
Nahitana hetsi-panoherana isan'andro tao amin'ny tranoben'ny governora nandritra ny 14 andro maninjitra. Niparitaka vetivety tany amin'ireo kaominina maro hafa ao Porto Riko avy eo ny fihetsiketsehana. Natao tamin'ny 22 Jolay ny fihetsiketsehana goavana indrindra, tombanana ho nahasarika olona 600.000 ohatra ny tao San Juan irery.
#FunFact of this march in #PuertoRico. It wasn’t scheduled by any organization. It happened organically in social media by #PuertoRicans who wanted to protest against #Rosselló, demanding his resignation. #ParoNacional #News #ParoNacionalPR #RickyRenuncia ?:@NoticentroWAPA pic.twitter.com/gpLBXPhbPY
#FunFact Zava-misy mahafinaritra tamin'ity diabe ity tao#PuertoRico. Tsy nisy fikambanana nikarakara izany. Nitranga tao amin'ny media sosialy izany, nalamin'ireo #PuertoRicans te-hanohitra an'i #Rosselló, mitaky ny fialany. #ParoNacional #News #ParoNacionalPR #RickyRenuncia ?:@NoticentroWAPA
Saingy tsy voafetra ho an'i Porto Riko ihany ny hetsika. Fihetsiketsehana maro no natao tany amin'ireo firenena izay ahitana Porto Rikàna, ao anatin'izany i Espaina, Arzantina, Slovenia, Frantsa, Hôlandy ary Etazonia.
Nahitana endrika ara-kolontsaina sy ara-java-kanto ihany koa ny fihetsiketsehana. Victoria Leandra, mpanao gazety nanangana resaka tamin'ny Twitter izay manasongadina ny fomba vaovao hitan'ny Porto Rikàna amin'ny fanaovana fihetsiketsehana:
??THREAD: All the original ways in which Puerto Ricans have said #RickyRenuncia
??RESAKA: Ny fomba orizinaly rehetra izay nolazain'ny Porto Rikàna #RickyRenuncia
Voampanga ho nampiasa hery tafahoatra ny mpitandro ny filaminana, ary nanitsakitsaka ny fanavaozana ny polisy nodidian'ny Fitsarana Federaly. Tsy maintsy lazaina fa ny fihetsiketsehana tao Puerto Rico dia nilamina tokoa, araka ny nasongadin'ilay antrôpôlôjista ara-kolontsaina sady mpanoratra tantara an-tsoratra, Rima Brusi tao amin'ny Twitter:
500000 no nanao diabe, ary fisamborana dimy fotsiny, tamin'ny farany? Hoy aho hoe tsy vitany hoe tsy-nanao-herisetra ireo mpanao hetsi-panoherana ireo – fa manaja fitsipika sy tia mamorona ary mifehy tena izy ireo.
Niverina indray ny mpanao fihetsiketsehana ny ampitson'iny mba hanadio ny toerana nanaovana ny hetsika:
— next latina to accept an EGOT ?? (@TheJosieMarie) July 16, 2019
Ireo zavatra tsy ho asehon'izy ireo aminao amin'ny haino aman-jery satria tian'izy ireo mba hieritreritra ny ratsy kokoa ianao:
1- olona manadio ny fahavoazana natao omaly hariva
2- olona tafaray mifanampy
Saingy andro maromaro talohan'ny nielezan'ny vaovao fametraham-pialàn'i Rosselló, nampahatsiahy ireo mpamaky i Xiomara Torres Rivera, mpamakafaka manoratra ao amin'ny tetikasa fanaovan-gazety Todas, fa hanomboka ny tena asa rehefa miala amin'ny biraony ny governora:
Mifantoka aty amintsika ankehitriny mason'izao tontolo izao satria sahy nanova ny teny ho asa isika, nanova ny hatezerantsika ho asa. Fanombohana ihany ny fangatahana ny fametraham-pialan'ny [governora]. Manana fandinihana maro atao isika mba hahafahana mandray fanapahan-kevitra hafa fa tsy mitodika any aoriana. Mba ho sahy mitaky ny firenena mendrika antsika. Fanadihadiana olom-pirenena, fanafoanana ny trosan'ny [fanjakana], fampianarana miaraka amin'ny fomba fijery miralenta, fikarakarana ara-pahasalamana sy fisotroan-dronono mendrika ary governemanta miaraka amin'ny olona izay mametraka ny filan'ny vahoaka ho lohalaharana.
Hanohy hitantara ny fivoaran'ity tantara ity ny Global Voices.
Nanampy tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity i Ana Portnoy
Shily 2 herinandro izay